VLC 4, iyo huru yekuvandudza iyo ichave yangu multimedia zvese-mu-imwe | Linux Vakapindwa muropa
VLC 4, iyo hombe yekuvandudza inozove yangu yese-in-one kutamba multimedia zvemukati… kana ichishanda
Muna Kurume, VideoLan yakabvunza nharaunda ichitsvaga maalbum cover kuti itumire screenshots. Panguva iyoyo Tiri kushamisika "VLC 4.0 iri kudzika here?", Asi nguva yapindura HERE kumubvunzo iwoyo. Zvakare, kubva pane izvo zvatinoona kana tikashandisa iyo yekuvandudza vhezheni, zvinoita sekunge VLC 4.0, pamwe neshanduko huru mumashandisirwo ayo, ichasvika mumavhiki mashoma anotevera, asi isu tinogona (ndoda) kuvimbisa kuti iyo yekumirira ichave yakakosha.
VideoLan yanga ichipa VLC 4.0 kwenguva yakareba ikozvino. Husiku vhezheni (hezvino zvekuburitsa zvinongedzo). Vashandisi veLinux, senge tinotsanangura Munguva yakapfuura, tinogona kuyedza kuburikidza neiyo Snap package, saka inoisa pasina kubata iyo yakagadzikana vhezheni yeVLC uye zvese zvakachengeteka, asi isu tinofanirwa kuve nemoyo murefu wekumhanya, kana zvirinani kana tiine raibhurari yemultimedia (vhidhiyo uye / kana odhiyo) yakakura kwazvo. Mushure mekuzviyedza futi, ndinogona kungotaura chinhu chimwe: chimbozama ... zvirinani kana izvo zvaunofarira uri mumhanzi.
1 VLC 4.0 yakavandudza zvakanyanya raibhurari yayo yemumhanzi
2 Yako yazvino Achilles chitsitsinho: vhidhiyo
3 VLC 4.0 inovimbisa, asi zvinotora moyo murefu
VLC 4.0 yakavandudza zvakanyanya raibhurari yayo yemumhanzi
Nekuti hongu, zvinhu sezvazviri: kana tangoisa kuraira kwekuisa iyo Husiku vhezheni yeVLC 4.0 paLinux (Sudo snap yekuisa vlc -edge), tinogona kuwana chimwe chinhu chinoshanda zvakanyanya, chinonoka, asi tinogona kuchirega unganidza ruzivo rwese uye tizvitsaurire kune chimwe chinhu kusvikira chapera. Paunenge usisafanirwe kunongedza chero chinhu, ikozvino inoshanda zvakanyanya kuwanda kuti mwedzi mishoma yapfuura, kana zvirinani ndiwo mafungiro anonakidza andakave nawo Kubuntu 20.04.
Uye zvakare, sezvauri kuona mune iyo skrini inotungamira ino chinyorwa, iyo interface inopa zvese zvatingave tichishuwira, sedare repano kuruboshwe uko kwatinoona maartist, peji rine ese madisc akafanana, kune izvo zvinokwanisika kuwedzera kuti dzese nziyo dzinoonekwa dzakanyorwa, uye mutsara wekubereka. Kana tichida, tinogona kuita kuti zvese zvinyangarike kuitira kuti zviongororwe nealbum art zvionekwe, chimwe chinhu icho ini pachezvangu chandinofunga kuti ndichaita zvishoma kana kusaita chinhu. Zvandinosuwa uye ndisingazive kana zvichawedzera mune ramangwana ndiyo sarudzo yekuratidza mamwe marongero epamberi, sekurekodha.
Yako yazvino Achilles chitsitsinho: vhidhiyo
Hazvishande. Kana hazviiti pakombuta yangu. MuWindows, kwandakamboedzawo, mavhidhiyo anoburitswa pasina matambudziko, asi muKubuntu 20.04 tichaona chimwe chinhu senge iri mune yapfuura skrini: mune yakanakisa kesi tichaona kumashure kwakasvibira; pakaipa, girini kumashure neakashata mabhuruu mativi, ayo asingachinje zvinhu zvakanyanya futi. Uye, chii chakaipisisa, kana tikaridza vhidhiyo, VLC 4.0 haichatibvumidze kuita chero chimwe chinhu, sekutamba mimhanzi zvakare kunze kwekunge titangazve iyo app. Zvine musoro, VideoLan haizoburitse vhezheni itsva kudzamara zvese zvanyatsoshanda, uye iri iguru ravachazogadzirisa nekukurumidza kwete gare gare.
Kutaura nezve vhidhiyo, uye chimwe chinhu chandisina chokwadi chekuti ndinoda, izvozvi tamba mumawindo maviri: mune iyo huru tichaona vhidhiyo uye pane zvakanyanya kukosha zvekutonga; Kuchikoro chesekondari isu tichaona zvakafanana chinhu icho chatinoona patinotamba chero zvimwe zvirimo, senge mimhanzi. Tichifunga kuti ini handina kukwanisa kuzviyedza mushe muLinux (uye kuti muWindows ndasarudza kurodha pasi vhezheni ndisati ndaedza zvimwe), ndinogona kungoti zvinoita kunge zvinokanganisa zvisina basa, asi ndinofunga kuti ini / isu uchazojaira nayo nhanho yemamiriro ekunze.
VLC 4.0 inovimbisa, asi zvinotora moyo murefu
VideoLan yakaratidzwa muna Kukadzi wegore rapfuura iyo nyowani interface yeiyo VLC, imwe iyo inotaridzika zvakanyanya senge nharembozha uye kuti ichavandudza zvakanyanya raibhurari yemultimedia. Akaiisa muchitaera uye ndinofunga hongu, iyo yekuvandudza ichave yakakosha, kunyanya kune mumwe munhu seni anozove neapp yaakatove akaisira mavhidhiyo raibhurari yemumhanzi yaagara achitsvaga, kuwedzera pakukwanisa shandisa yakaenzana. Asi iwe uchave uchatofanira kuva nemoyo murefu kune zvese kuti zvishande sezvazvinofanira kuita. Parizvino, uye kana vasina kukwiridzira kusimudzira, ndave kutoshandisa iyo kuridza mimhanzi uye ndinofara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » VLC 4, iyo hombe yekuvandudza inozove yangu yese-in-one kutamba multimedia zvemukati… kana ichishanda
Musoro wenyaya akadaro
Chinangwa cheVLC hausi mimhanzi, kune izvo pane zvimwe zvinhu, VLC ndeye vhidhiyo uye kana tichida kunyepedzera kuti inoshanda kune zvese, zvidzime tiende. Ko kana ivo vachizofanira kuzviita kamwechete ndezvekuti ma subtitles anoshanda neChromecast, iri harisi dambudziko reChromecast, idambudziko reVLC, nekuti vanoshanda neplex uye nevideostream futi.
Pindura kune Subtitles
Mhoro. VLC inogona kunge yakaberekwa nenzira iyoyo, asi pasina mubvunzo yakachinja nekufamba kwenguva. Iwe unongofanirwa kuona zvidzitiro uye wozvienzanisa neizvo zveVLC 3: mune yazvino vhezheni hapana kurongeka, mune yechina kune. Uye dai zvaive zvemavhidhiyo chete, zvaizonzwisisika kana paine sarudzo senge "Dombo" kana "Classic" pane yakaenzana? Kana nei ichiratidzika mune yekuruboshwe pane (kana iwe uchigonesa) "Music"? VideoLan inodawo kuve yedu app yemimhanzi uye mune yangu kesi ichave.
TimeTrex Vhura Source Nharaunda Yekutsikisa. Yevanhu manejimendi manejimendi software